Nhengo dzeMicrosoft Corporation nhasi, mutengo weMSFT iri paIndaneti ikozvino, inowanidza mitengo yeMicrosoft Corporation.
MSFT = 323.01 US dhora
-6.48 USD (-2.00613%)
Mutengo wemari inoshanduka kubvira zuro
Shanduko mumutengo wemasheya we Microsoft Corporation mu US dhora inoitika kamwe pazuva. The stock quote stock mutengo ine avhareji kukosha pazuva. Zvese zvekushandurwa kwemari ye crypto kunoitwa mumisika yekutengesa ye crypto. 1 stock of Microsoft Corporation ikozvino 323.01 stock of US dhora. Mutengo we1 stock ye Microsoft Corporation ikozvino yakaenzana ne 323.01 stock ye US dhora. I Microsoft Corporation mwero wakadzikira kubva pa US dhora ne -197 mazana emakumi muzana muzana.
Microsoft Corporation inyanzvi yekambani inayo US dhora
Vhiki rapfuura, Microsoft Corporation inogona kutengeswa 336.63 US dhora. Gore rapfuura, Microsoft Corporation inogona kuchinjaniswa kwe 211.80 stock ye US dhora. Makore matatu apfuura, Microsoft Corporation inogona kutengeswa ye 108.52 US dhora yeUkraine. Pano panoratidzwa chati yemutengo wenguva wenguva dzakasiyana. -4.05% - shanduko mumutengo wemitengo we Microsoft Corporation mu US dhora yeUkraine pasvondo. -3.99% - shanduko mumutengo wemitengo we Microsoft Corporation mu US dhora pamwedzi.
Stock quotes Microsoft Corporation US dhora
MSFT Kuti US dhora (USD)
1 MSFT 323.01 US dhora
5 MSFT 1 615.05 US dhora
10 MSFT 3 230.10 US dhora
25 MSFT 8 075.25 US dhora
50 MSFT 16 150.50 US dhora
100 MSFT 32 301 US dhora
250 MSFT 80 752.50 US dhora
500 MSFT 161 505 US dhora
Stock Quote converter izvozvi 10 stock of Microsoft Corporation inopa 3 230.10 US dhora. Stock quote converter nhasi inopa 8 075.25 US dhora ye 25 stock of Microsoft Corporation. Kuti ishandure 50 stock of Microsoft Corporation, 16 150.50 US dhora zvinodiwa. Nhasi, 32 301 US dhora inogona kutengwa kwe 100 stock ye Microsoft Corporation. Kana iwe uine 80 752.50 US dhora, ipapo mu British Virgin Islands vanogona kutengeswa kwe 250 stock of Microsoft Corporation. Unogona kutengesa 500 stock of Microsoft Corporation ye 161 505 US dhora.
MSFT mutengo wemari yakaitika
01/12/2021 330.08 USD -0.51 ↓
30/11/2021 330.59 USD -6.04 ↓
29/11/2021 336.63 USD -
3 Zvita 2021, 1 stock ye Microsoft Corporation inodhura 323.01 US dhora. Microsoft Corporation mu US dhora pa 2 Zvita 2021 yakaenzana ne 329.49 US dhora. 1 Zvita 2021, 1 stock ye Microsoft Corporation = 330.08 US dhora. Nhamba huru yemasheya yakakwira ye MSFT / USD yemwedzi wapfuura yaive pa 29/11/2021. Iyo yepasi pasi MSFT / USD mutengo wechitoro mu yaive pa 03/12/2021.
Chimwe chikamu cheMicrosoft Corporation nhasi chinomira pa 323.01 $. Mutengo weMSFT wehove washanduka kusvika -2.00613% kana -6.48 USD kubvira musi wekupedzisira wekutengesa. Iwe unogona kutenga zvikamu zana zveMicrosoft Corporation zve 32 301 US dhora kana kutengesa 50 mazana eMSFT ye 16 150.50 US dhora.
Microsoft Corp inyanzvi yekambaniki. Iko inobudirira, chireisheni, uye kutsigira zvakasiyana-siyana zvezvikombiti zvepurogiramu nemasevisi. Bhizimisi rayo rakarongerwa muzvikamu zvitatu: Kubudirira uye Business Processes, Intelligent Cloud, uye More Personal Computing.